Hotel Collection Duvet Cover Set Stitch Luxury Bedding Sets, China Hotel Collection Duvet Cover Set Stitch Luxury Bedding Sets Mpanamboatra, Mpamatsy, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Model Number: G2012
● Fitaovana: Microfiber borosy 100%.
● Ny zipper tsy hita maso dia manampy anao mampiditra sy manaisotra ny délvet anao mora foana. Saron-doha miaraka amin'ny fanidiana valopy. Ny fatorana zoro efatra dia hanampy anao hitazona ny duvetanao, manana fikasihana malefaka sy milamina izy io, fanomezana lehibe ho an'ny fianakaviana sy namana.
● Endri-javatra: ity fonosana fonosana duvet vita amin'ny lamba ity dia mamorona endrika trano fandraisam-bahiny namboarina ao amin'ny efitranonao. Mitondra anao ny fiainana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fampiononana ao an-tranonao manokana. Miaraka amina tarika manga voaravaka amin'ny fonony vita amin'ny duvet fotsy matevina, ataovy mazava kokoa ny fomba tsotra ary ny ankehitriny. ny fandriana malemilemy manintona dia mamorona toerana manintona sy milamina mba hatoriana ao anaty torimaso.
● Toromarika fanasan-damba: azo sasana ny milina, maina amin'ny hafanana ambany, tsy ilaina ny manisy vy.
Ny hosoka Euro sy ondana haingon-trano dia amidy samy hafa.
Product Name Hotel Collection Duvet Cover Set Mametaka lamba firakotra mandry
Akanjo amboradara volon'osy balonika haitraitra eropeana ho an'ny efitranon'ny ankizy
Ultra Soft Microfiber Stripe Pattern fandriana fandriana HF29031